Fiaraha- miasa amin’ny Zambie : Tombontsoa ho an’ny firenena malagasy -
AccueilRaharaham-pirenenaFiaraha- miasa amin’ny Zambie : Tombontsoa ho an’ny firenena malagasy
Fotoana fohy taorian’ny fahatongavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina sady filohan’ny Comesa tao Lusaka dia avy hatrany dia noraisin’ny filoha zambianina, Edgar Lungu ny tenany narahin’ny fifanatrehana. Niompana tamin’ny fifanarahana lasitry izay nosoniavina tamin’ny taona 2008 ny fifampiresahana , fifanarahana izay azo havadika ho tetikasa azo tsapain-tanana sy azo tanterahiny hoy ny fomba nilazan’ny filoham-pirenena malagasy azy.
Ity fitsidihana izay tanterahin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ao Zambie ity rahateo dia manokatra ny fifampiresahana sy fifanakalozana eo amin’ny firenena roa tonta ihany koa. « Tena marina fa sady amin’ny maha filoham-pirenena Malagasy ahy sy amin’ny maha filohan’ny COMESA ahy no ahatongavako eto. Ka ho- resahina ihany koa ny mikasika an’i Afrika, tahaka ny hiresahana ny fifanarahana eo amin’ny firenena afrikanina iray manontolo, fa zava- dehibe indrindra ihany koa ny hiresahana mikasika ny fifanarahan’ny firenena roa tonta. Fantatro fa samy mitovy fomba fijery isika izay mitovy ny fomba fitantanana ny sehatra ny tontolo ara-boajanahary . Ary izao dia mieritreritra fa izany dia manosika antsika hifanaraka sy hifampiraharaha, hifampizara fahaiza- manao», io no fanazavavana noentin’ny filoham-pirenena Malagasy. Nandritra ny fifanarahan’ny firenena ara- diplaomatika notanterahin’ny firenena roa tonta ny taona 1971, dia tsara hatrany ny fifandraisan’i Madagasikara sy Zambie . Nampatsiahy ihany koa ny fifanarahana lasitra teo amin’ny firenena roa tonta ny filoha Malagasy izay nosoniavina ny taona 2008, io izay mahakasika sehatr’asa maro isan-karazany izay hahazon’ny firenena roa tombontsoa.
Nambaran’ny filoha ihany koa fa fotoana izao ahafahana amin’ izay mamadika io fifanarahana lasitra io ho tetikasa. Ary nomarihiny « fa ireo minisitra voakasika eo amin’ny firenena roa tonta dia hifampidinika , hahafahana manafaingana ny fifanarahana ». Maro, noho izany, ireo sehatra maro hojerena amin’ izany dia eo ny mikasika ny fambolena izay lohalaharana ho anay, ny varotra, fizahan-tany, ny angovo ary ny fampianarana. Eo amin’ io sehatra iray farany io dia hisy ny fifanakalozana eo amin’ ireo mpampianatra anglisy sy frantsay.
Fanekena ny fifanarahana tao Parisy mikasika ny fiovan’ny toetr’ andro
Nandritra ny fivoriana niarahan’ny firenena roa tonta tao State House Lusaka ny fahafito ny volana jona , teo amin’ i Madagasikara sy Zambie, dia samy nanaiky ny fifanarahana natao tao Parisy momba ny fiovan’ny toetr’ andro ny firenena roa tonta . Tsy ireo ihany anefa fa eo ihany koa ny SADC , COMESA izay mizaka ny vokatr’io fiovaovan’ny toetr’ andro io izay manimba zavatra maro. Ny fiovan’ny toetry ny andro rahateo izay tsy azo hafenina fa hiaraha -mahita, ka ilaina ny fiarahana ahafahana miady amin’ izany.
Nankahery ny firenena malagasy ihany koa ny filoha zambianina mikasika ny fahaverezana aina taty amin’ny firenena malagasy, nandritra ny fandalovan’ ilay rivo-doza Enawo. Nandritra izany dia niarahaba ny filoha malagasy ity filoha zambianina ity tamin’ ny ezaka nataon’izy ireo sy fandraisana andraikitra, nahafahana namerina indray ny fitoniana teto amin’ ny firenena na dia teo aza izany rivo- doza izany io izay mbola vokatry ny fiovaovan’ny toetr’ andro hoy izy. Nambaran’ ity filoha zambianina tamin’ny filoham-pirenena malagasy ihany koa ny voka-dratsy izay noentin’ ny fiovaovan’ny toetr’ andro tao amin’ny firenena izay tantanany, dia eo ny fidinan’ny rano, izay nisy fiantraikany manokana tamin’ny fambolena tany an-toerana.